चरकको ‘चमत्कार’ : गम्भीर भनिएका सांसद शाही चार दिनमै होटलमा सारिए
फाइल तस्वीर: चरक अस्पतालमा उपचारका क्रममा सांसद शाही ।
गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य खिमविक्रम शाहीलाई अस्पतालबाट होटलमा सारिएको छ ।
उनलाई गत आइतबार चरक मेमोरियल अस्पतालबाट नजिकैको होटलमा सारिएको पार्टी प्रदेश अध्यक्ष शंकर बरालले जानकारी दिए ।
'उहाँ गम्भीर भएको कोरोनाले होइन । अरु स्वास्थ्य अवस्था सुधार भएपछि उहाँलाई सारिएको हो,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध संसदमा पेस अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने दिन १५ वैशाखमै सांसद शाही सम्पर्कविहीन भएका थिए । पछि उनी चरकको आईसीयूमा भेटिए ।
त्यस दिन अस्पतालले समेत सांसद शाहीको अवस्था असाध्यै गम्भीर रहेको बताएको थियो । तर, उनी चार दिनमै सामान्य भएको भन्दै होटलमा सारिएका छन् । पोखराको जिरो किलोमिटरमा उनको डेरा भए पनि त्यहाँ नबसी होटलमा बसेका हुन् ।
सांसद शाही सम्पर्कविहीन भएपछि जनमोर्चा सचेतक पियारी थापाले अवस्था सार्वजनिक नहुँदासम्म संसद रोक्न माग गरेकी थिइन् । त्यसपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संसद स्थगित गरेका थिए ।
स्थगित संसद् कहिले बस्छ भन्ने टुंगो लागेको छैन । बैठकको मितिबारे सहमति जुटाउन सभामुख अधिकारीले आज दलका नेतासँग छलफल गर्दै छन् ।
‘बेपत्ता’ सांसदको कोरोना परीक्षण शंकास्पद : एकैदिन संकलित नमुनाको दुईथरी रिपोर्ट
पोजिटिभ आएको स्वाब सांसद शाहीकै हो ? प्रयोगशालाकर्मी भन्छन् - केही गडबड छ
'हराएका' माननीय उही दिन भेटिए, सभामुखले कहिले डाक्लान् संसद ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख २१, २०७८, १३:१४:००